IIMOLES KULA MALUNGU OMZIMBA AHLUKENEYO ATYHILA MALUNGA NOXINZELELO LWEZEZIMALI- PAMPEREDPEOPLENY.COM - NGEENKWENKWEZI
IiMoles Kula Malungu Omzimba Zityhila Ingxaki Yemali
Iindaba Abalobi abathathu boyika ukusweleka xa inqanawa ingqubana nesikhephe kunxweme lwaseMangaluru
Imidlalo UMedvedev ukhupha iMonte Carlo Masters emva kovavanyo oluqinisekileyo lwe-coronavirus
Iimoto I-Kabira yokuHamba kweHermes i-75 yokuKhawulezisa ukuThengisa ukuSebenza ngeSikuta soMbane esaziswa eIndiya
Iimuvi I-Ugadi 2021: UMahesh Babu, uRam Charan, uJr NTR, iDarshan kunye nezinye iinkwenkwezi zaseMzantsi zithumela iminqweno kubalandeli babo
Ekhaya Ukuvumisa ngeenkwenkwezi Ukufundwa kwesandla I-Palmistry oi-Syeda Farah Noor Ngu ISyeda Farah Noor ngo-Okthobha 31, 2018
USamudrika Shastra utyhila ukubaluleka kwee-moles kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba wethu.
Ngokwenkolelo, xa umntu ene-moles kula malungu omzimba, kukholelwa ukuba umntu uya kufumana ubunzima kwezemali.
Iimpahla zokunxiba zaseIndiya zabantwana
Iincukuthu ezikhoyo kula malungu athile omzimba zityhila ngeendleko ezingenakuphepheka umntu aya kuzenza.
Jonga ii-moles ezahlukeneyo kunye nokubaluleka kwazo ...
Imole kwiKhusi lakho lasekhohlo
Ukuba unemvukuzane esidleleni sakho sasekhohlo, luphawu lokuba uya kuba nomthombo omkhulu wengeniso. Nangona kunjalo, ubuya kuba sezinzwaneni zakho njengoko ungasileli kwimali oyigcinileyo.
Imole kaMlomo osezantsi
Ukuba umntu une-moles naphina kufutshane nomlomo ongezantsi, oko kubonisa ukuba umntu uhlala ejongana nemali eninzi ixesha ebomini bakhe.
Imole kwiPlanga lasekhohlo
Ukuba umntu unemole esesandleni sakhe sasekhohlo, ngakumbi leyo ingangeni ngaphakathi kwinqindi evaliweyo, oko kuthetha ukuba lo mntu uza kuhamba nemali enzima yokuphatha ingxaki ebudaleni bakhe. Nangona luphawu oluhle njengoko ungayi kujongana nokunqongophala kwemali. Ukufumanisa kunzima ukunciphisa iindleko zakho.
Imole kwiNyawo lasekhohlo
Ukuba umntu une-mole naphi na emlenzeni wakhe wasekhohlo, kukholelwa ukuba umntu uya kufumana ilahleko engachazwanga yemali. Nokuba bangabonakala bezama kangakanani ukugcina imali yabo, baya kuyisebenzisa yonke.
Imole kwi-Index Finger
Ukuba umntu une-mole ekhoyo kwicala elingaphakathi lomnwe wesalathiso, luphawu lokuba aba bantu banokuphatha iingxaki ezinxulumene nemali ebomini babo. Kukho amathuba okuba ngaxa lithile banokuthi baphile kwimeko yezandla zomlomo.
indlela yokukhulula ubunzima ebusweni
Ukuba umntu une-mole ebukhali ebumnyameni kwiBhanti yeJupiter, luphawu lokuba umntu akazukufumana mali ixesha elide njengoko ingazukunamathela. Kuqikelelwa ukuba nangona aba bantu batshatele kwiintsapho ezizityebi, nangona kunjalo baya kuhlala bejongana neemeko ezinzima.
Imole kwiKhwapha lasekhohlo
Ukuba umntu unemole kule ndawo, ke aba bantu kufuneka balumke kakhulu ngempilo yabo. Aba bantu banemali yabo eninzi yokufumana unyango lwezifo kunye nezifo. Esi sesona sizathu siphambili sokuba bengenalo ulawulo kwinkcitho yabo.
Ungalufumana njani ulusu olufanelekileyo ekhaya
Ungazifumana njani iinwele ezithe tye ekhaya
ukunciphisa umzimba kunye nobusi
indlela yokwenza i-cutlet kwi-oven microwaves
indlela yokususa amabala egazi kwiphepha lokulala
indlela yokususa amanqatha esandla